အမေ့သား: ကလေးရေ အားတင်းထားပါ
ရေနစ်နေသူအတွက်တော့ ကောက်ရိုးတမျှင်ကလည်း အားကိုးရာပါ၊
ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ကလေးအတွက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့  မေတ္တာ၊ဂရုဏာ၊စေတနာက သူ့ရဲ့ အားကိုးရာပါ၊
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့နူတ်ခမ်းနီလေးတတောင့်
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဆံညှပ်ကလေးတခု
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့  ခေါင်းစီးကြိုးလေးတခုရဲ့ တန်ဖိုးရယ်
တခြားသော သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ တနေ့တာ သုံးစွဲမဲ့အသုံးလေးက၊ကလေးတယောက်ရဲ့ အသက်တချောင်းကို ကယ်တင်ဖို့ အတွက်အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူငယ်ချင်းများသိမြင်ခံစားနိုင်ပါစေ။
သူငယ်ချင်းတို့မှာလည်း မိသားစုရှိမယ်၊ညီအစ်ကိုမောင်နှမရှိမယ၊် တူတူမတွေရှိမယ်၊ဆွေမျိုးသားချင်းရှိမယ။်
ရပ်ဆွေရပ်မျိုးဆိုတာရှိမယ်၊သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းရှိမယ်၊သူတို့တွေထဲက သူတို့တွေရဲ့့ကလေးတစ်
ယောက်ခုလို့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံနေရရင် သူငယ်ချင်းတို့ ပြုံးပျော်နိုင်မလား။ခံစားနေရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်အပါအဝင် အားလုံးကိုယ်စီသိနှင့်ပြီးသားပါ။
တခါလောက်၊တရက်လောက် တနေ့တာသုံးစွဲမဲ့ အသုံးလေးထဲကနေကူညီခဲ့မယ်ဆိုရင်.............
နှမ်းတစေ့နဲ့ ဆီမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ နှမ်းစေ့ပေါင်းများစွာစုမိကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဆီပေပါတခုဖြစ်လာနိုင်သလို
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နိုင်သလောက်လေး၊တခါလောက၊် တရက်လောက်က၊ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ကလေးလေးရဲ့ 
Posted by အမေ့သား at Friday, December 02, 2011
ချစ်ကြည်အေး December 2, 2011 at 10:45 PM
သတင်းလင့်ခ်လေး ထည့်ပေးထားရင် ပိုကောင်းမယ် အမေ့သားရေ..... အကြံပြုတာပါနော်....
Anonymous December 2, 2011 at 11:30 PM
အမေ့သားရေ ကော်ပီလုပ်သွားတယ်။ ရတယ်မဟုတ်လား။
gina vinasoy July 12, 2012 at 3:37 PM
Hi ! I find this site Insparational,nice post of poem.Iwould be glad if you going to visit my webite too.
စာအမှတ် ၁/၂၀၁၁ ပြောင်းလဲခြင်း
ကလေးရေ အားတင်းထားပါ အပိုင်းနှစ်
အမေ့ရဲ့  ကလေးပါ အမေ